पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,असार २३ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Classic Khabar
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,असार २३ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
July 7, 2021 124
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असार २३ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ जुलाई ७ तारीख असार कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथी रोहिणी नक्षत्र गण्ड योग गर करण चन्द्रमां बृष राशिमा आनन्दादि योगमा शुभ योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु प्रदोषव्रत (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा बृद्यिहुने योग रहेकोछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सजगरहनु पर्ने समय रहेकोछ । यात्रामा सजग रहनुहोला । बादबीवादको झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) ब्यापार ब्यवसायको निम्ति तथा नयाँ लगानिका लागी राम्रो समय रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) पुराना तथा प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । तपाईको क्षमताको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । प्रतिपक्क्षीह? सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) परोपकारको क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्च हुन सक्छ । मान्यजनको अनुसरण बाट बिशेष लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारिरीक आलस्यताले सताउला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । अनावश्यक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिश्पर्दीहरू कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्य क्षेत्र सहज बन्नेछ । दाजुभाई तथा मित्रजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यमा बिशेष फाईदा पुग्नेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) कार्य सम्पादनमा अ?को दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । तपाईको कार्यको फल अ?लाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यह?मा सफलता हात लाग्नेछन । अध्यन अध्यापनमा लगाईएको समय महत्वपूर्ण रहनेछ । शिप तथा क्षमताका आधारमा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) अपरीचीत ब्यक्तिहरुको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । शत्रु सबल रहनेछन । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष सजग रहनुहोला । आर्र्थीक झमेलाले सताउनेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । सानो प्रयासले ब्यक्तित्व बिकासमा निकै टेवा पूर्याउनेछ । आम्दानि मध्यम रहनेछ । बौधिक ब्यत्तित्वह?को अनुशरण दिर्घकालिन फाईदाका श्रोत बन्नेछन । आफु भन्दा सानोको सहयोगमा गरिएका कामहरु दीगो फाईदा मुलक साबित हुनेछन ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । मान्यजनह?को साथसहयोगमा जटिल कार्यह? सम्पादित रहनेछन । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बल पराक्रममा बृद्धि हुनेछ ।
Prevकोरो,नाले अहिले अझ कतीले ज्यान गुमाएका छन ? खुल्यो ड,रलाग्दो डाटा,सरकारले सिधा कुरा किन भन्दैन,आखिर लकडा,उन कसको लागी ? भिडियो हेर्नुहोस
Nextघरमै लिन आएका प्रेमीसँग स्कुटरमा निस्केकी विना सम्पर्कबिहिन, प्रेमी पक्राउ
श्रीमती खान बनाउदै थिईन उता श्रीमान भने बाढी आयो भनेर माछा पोखरीमा कुलो थुन्न जादा बाढीले बगाएपछी नाबालक छोरालाई अंगालोमा बेर्दै गरिन बिलौना (भिडियो)
दाई खोज्दै जाँदा भाइलाइ भेटेपछि…..
आफूभन्दा १३० स्थान माथि रहेको टोली अस्ट्रेलियासंग नेपाल ३ -० रे ले पराजित, १० खेलाडी हुँदा पनि राम्रो खेली नेपाली
सभामुखविरुद्ध ओली सर्वोच्चमा
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1040)
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (918)
शिल्पालाई सपोर्ट गर्दै प्रकाशलाई कडा जवाफ,कोहिलाई दारा निस्केको भन्यो कोहिलाई मानसिक समस्यामा पुरायो (भिडियो सहित) (759)
प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा (715)
३ वर्ष पहिले बुवाको मृत्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली (652)
रात दिन श्रीमानको शा रीरिक स म्प र्कको या तना सहन नसक्दा (641)
नायक किशोर खतिवडा आफुलाई गर्भवती बनाए भन्दै आरोप लगाउने लक्ष्मी गदाललाई भेट्न पुगे, भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) (603)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (579)
कन्चनको अस्पतालमा मृ,त्यु, बल्ल मुख खोलिन भा,वुक हुँदै अनिशाले वास्तविकता (भिडियो सहित) (578)
जस्तो गुरु तेस्तै चेला हुन किशोर खतिवडा,लक्ष्मीको कुनै हैसियत छैन श्रीजना वाग्लेलाई जथाभाबी भन्ने (भिडियो सहित) (578)
यस्तो अवस्थामा सातमहिने शिशु र युवकको शव फेला
तालिवानीले देखाए आफ्नो वास्तविकता, ४ जनालाई बीच चोकमा झु न्ड्या ए
लता मंगेशकरको अधुरो प्रेम कहानी- जसका कारण उनले जिवनभर विवाह गरिनन्
यिनै हुन् जसले म ‘यूके लाहुरे हुँ’ तिमीलाई माया गर्छु भन्दै महिलासँग लाखौँ ठगी गर्थे
© Copyright 2016–2021 Classic Khabar. All rights reserved.